တက္ကသိုလ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပညာရေး | USAHello ပညာရေးအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
ကောလိပ်ကျောင်းလျှောက်ထားပထမဆုံးနေ့မတိုင်မီလပေါင်းအတော်ကြာအောင်ပြုသောအမှုခံရဖို့ရှိပါတယ်. သင်အချိန်ပေါ်စာရွက်စာတမ်းမှသွားနှင့်စုသိမ်းခြင်းနှင့်တင်ပြချင်ကျောင်းတွင်အဘယ်သို့ type ကိုဆုံးဖြတ်ရပါမည် ဆက်ဖတ်ရန်
တစ်ဦးကပညာသင်ဆုကိုသင်ကောလိပ်ကျောင်းများအတွက်ပေးဆောင်အကူအညီလိုလျှင်သင်လျှောက်ထားနိုင်သည်ကိုပိုက်ဆံလှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. အသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့အထူးဖြစ်ကြောင်းပညာသင်ဆုအကြောင်းကိုလေ့လာပါ ဆက်ဖတ်ရန်
ကောလိပ် America မှာအလွန်စျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်. လူအတော်များများပညာသင်ဆုသို့မဟုတ်အစိုးရအကူအညီကိုခေါ်လှူဒါန်းခဲ့သည်ရန်ပုံငွေများကိုလျှောက်ထား. အခြားသူများကလည်းအခြိနျပိုငျးအလုပ်မလုပ်ဖို့ရှေးခယျြ ဆက်ဖတ်ရန်
သငျသညျအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောင်းတစ်ကျောင်းစတင်နိုင်ရန်လိုလျှင်, သင်သင့်အိမ်နိုင်ငံတွင်တယ်ဘယ်အရာကိုပညာရေးကိုပြသရန်လိုအပ်မည်. အလုပ်ရှင်များကိုသင့်ရဲ့ပညာရေးအကြောင်းကိုမေးမြန်းစေခြင်းငှါ, လွန်း. သငျသညျအကဲဖြတ်သင့်ရဲ့နိုင်ငံခြားမှတ်တမ်းထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်. သို့သော်သင်သည်သင်၏နေအိမ်တိုင်းပြည်တစ်ဒီဂရီသို့မဟုတ်လက်မှတ်ကိုရှိလျှင်ပင်, သင်သည်သင်၏ဟောင်းများကိုအလုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ဖို့ပိုအတန်းသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုယူဖို့လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
သင်သည်သင်၏ပညာရေးပြီးအောင်ချင်ပါနဲ့? အသစ်တစ်ခုကိုအလုပ်အဘို့အလေ့ကျင့်သို့မဟုတ်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေ? တက္ကသိုလ်သို့သွားရန်သို့မဟုတ် English လေ့လာသင်ယူ? သင်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကပညာရေးရနိုင်ပုံကိုထွက်ရှာပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
ကောလိပ်ကျောင်းမှကလေးတစ်ဦးကိုချွတ်ပေးပို့ခြင်းအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. ဒီကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုအားဖြင့်သင်တို့၏ကလေးကပွငျဆငျပွီးကူညီဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
ကောလိပ်မှ Going: တစ်ဒုက္ခသည်ကနေကောလိပ်ဘွဲ့ရဖို့အကြှနျုပျ၏ခရီးကောလိပ်မှ Going: ခေါင်းဆောင် Hassan, ဆိုမာလီယာကနေဒုက္ခသည်တစ်ဦး, USA တွင်ကောလိပ်သွားကသူ့အတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်များနှင့်အခြားဒုက္ခသည်များအောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးဖို့အကွံဉာဏျပေးထားပါတယ်။
မည်သူမဆိုအိပ်မက်မက်နိုင်ပြီးအရာအားလုံးဖြစ်နိုင်ယူအက်စ်အေပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုမီ, အများအပြားရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တိုင်းပြည်အကြောင်းကိုကောလာဟလများကိုနားထောငျ. သူမ၏အရာအားလုံးဖြစ်နိုင်တူသောသူမ၏ခံစားရဖန်ဆင်းရွှေ့အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးကိုယခင်ဒုက္ခသည်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။
5 သင်ကအမေရိကန်ကျောင်းများအတွက်အောင်မြင်ကူညီပါရန်အချက်များ5 သင်ကအမေရိကန်ကျောင်းများအတွက်အောင်မြင်ကူညီပါရန်အချက်များ. အသစ်တစ်ခုကိုအမေရိကန်နှင့်အမျှ, လွတ်လပ်မှုကိုသင်အိပ်မက်, ပညာရေး, အဆုံးမဲ့အခွင့်အလမ်းများ, နှင့်အောင်မြင်မှု။